‘Strollout’ no teny malaza 2021 any Aostralia: Milaza ankolaka ny famoahana vaksiny mitarazoka sy ny fanemorana ny hetsika momba ny toetrandro · Global Voices teny Malagasy
Voatsikera noho ny fitavozavozana amin'ireo olana lehibe i Scott Morrison
Voadika ny 23 Novambra 2021 3:22 GMT
Ny praiminisitra Aostraliana Scott Morrison natao vaksiny COVID-1. Pikantsary tamin'ny vaovaon'ny ABC Febroary 2021
Nisafidy ny ‘strollout’ (mitavozavoza) ho tenin’ny taona 2021 ilazana ny ezaka miharihary tamin’ny famoahana ny vaksiny mitarazoka any Aostralia ny foiben’ny rakibolana Australian National Dictionary Center (ANDC). Niteraka resabe anjotra ilay safidy, satria maro no manontany ny hevitr’ilay teny amin’ny resaka politika.
‘Mitavozavoza’ no tenintsika ho an'ny taona 2021: ny fampiharana mitarazoka ny programam-baksiny COVID-19 eto Aostralia. Vakio bebe kokoa momba ny safidinay sy ny lisitra fohy eto:
Noderaina tamin'ny fampiasana voalohany ilay teny ampahibemaso tamin'ny volana Mey 2021 ny mpitarika ny Filankevitry ny Sendikà Aostraliana, Sally McManus.
Tsy misy ny famoahana vaksiny, fa ny vaksiny mitavozavoza no misy.
Tokony efa vita vaksiny avokoa amin'izao fotoana izao ireo mpiasa efa nahazo taona sy manana fahasembanana. Tsy mbola vita izy ireo. Telo herinandro latsaka sisa dia tonga ny ririnina – aiza ny hamehana?
Nidera ny Sekretera Mpanampy Liam O'Brien i Sally noho ny fampiasana ilay teny voalohany, na dia tonga hatrany amin'ny kolontsaina pop sy ny tambajotra sosialy aza izany nanomboka teo. Nampiasain'ny mpanao hatsikana Charlie Pickering tamin'ny horonantsary manesoeso izany tamin'ny volana Aprily, maneso ny fiatrehan’ny firenena ny COVID-19 izay mandiso fanantenana.
Na dia teo aza ny valinteny niely patrana tamin'ny sioka voalohany momba io teny io nataon’i Sally McManus tamin'ny volana Mey 2021, dia milaza ny olona sasany fa tsy mbola nandre izany mihitsy, anisan'izany ireo olo-malaza sasany amin'ny fampitam-baovao:
Tsy mino aho fa misy amin'ireo fampitam-baovao mpiara-miasa amin'i Scotty no nampiasa ny teny hoe ‘strollout’ satria tsy mbola nanakiana mihitsy ny tahan'ny famoahana vaksiny izy ireo!
Maro no nanome tsiny ny praiminisitra Scott Morrison noho ny tsy fahampian'ny vaksiny, indrindra tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona 2021. Nahazo fanakianana niely patrana koa i Morrison tamin'ny filazana fa ‘tsy ihazakazahana’ ny famoahana izany, raha ny marina, manaiky ny tahan'ny tsy fahampian’ny vaksiny izy.
Nanomboka teo, nofaritana ho toy ny mitavozavoza tao amin'ny tambajotra sosialy ny sasany tamin'ireo politikany hafa, ao anatin'izany ny tsy fisian'ny tena fandraisana andraikitra mikasika ny famoahana etona karbona:
Hoy aho hoe mety tsara ny nanampiana ny ‘Strollout’. Mamaritra ny zava-drehetra ataon'ny #governemanta#Morrison mba hanemorana sy hampiviliana ny saina amin'ny #tsy fahombiazana, #fanavakavahana ary #heloka io teny io. Ny « strollout » lehibe indrindra dia ny bokikely nofinofy #ClimateAction natolotry ny @LiberalAus tany amin'ny @COP26
Miroborobo amin'ity karazana stoush (hamantarana ny Aostraliana amin'ny resaka ady na fifandirana-fandresen-dahatra) ity ny mpanao sariitatra. Nitarika ny lalana ilay ela nihetezana Peter Broelman. Lava loatra ka tsy antonona pejy’, ary sarotra tononina ny teniny hafa solony (mitambatambatra) nampiasainy tamin'ny taona ny hoe, ‘Jiolahin’olona tsy manam-pitiavana mandà ny toetr'andro ary tsy miraharaha afa-tsy ny tenany ny governemanta’ :
Mifandraika amin'ny COVID-19 ihany koa ny teny tamin’ny taona 2020. Ny teny hoe, ‘iso’, nafohezina ho an’ny teny hoe ‘isolation’ (fitokana-monina) izay azo avy amin'ny fihibohana, dia mety tsara hamaritana ny fihetseham-po manjombona tamin’ny 2020. Nanazava ilay mpikaroka ANDC, Mark Gwynn:
Ny fitiavanay ny fanafohezana ny teny eto Aostralia, ary ny fironan'olombelona voajanahary hanazaran'ny olona ny tsy fantatra sy mampatahotra ho zavatra mahazatra, dia nahitana haingana ny teny famaritana hoe ‘self-isolation’ (fitokana-monina) nohafohezina ho iso tamin'ny volana Marsa tamin'ity taona ity.
Nandray izany am-po ny olona sasany ary nanafohy ny anaran'ny Praiminisitra Scott Morrison ho Scomo, izay navadik'ireo mpitsikera azy tao amin'ny Twitter tamin'ny tenirohy hoe #Slomo.
Tsy vao izao no tafiditra tamin'ny resaka politika ny tenin'ny taona tany Aostralia. Nalaza be ilay ‘democracy sausage’ (saosisy demaokrasia) izay mpandresy tamin'ny 2016 — saingy tsy hoe tsy nisy akory ny resabe momba izany amin’ny maha andian-teny mitambatra azy. Namaritra azy io ho ‘Saosisy natono aroso miaraka amin'ny sila-mofo, novidina tao amin'ny biraom-pifidianana, saosisy mendimendy tamin'ny androm-pifidianana’ ny ANDC.
Navoaka tamin'ny taona 2016 ny fanaovana pirinty ny rakibolana nohavaozina. Andiany faharoa ihany io. Navoaka tamin'ny taona 1988 ny voalohany ary azo jerena anjotra.
Oseania4 herinandro izay